2015: sanadka shidma faraha ka joojiyay iyagoo Sheekadaas a - Rule News
2015: sanadka shidma faraha ka joojiyay iyagoo Sheekadaas a
ammaanka casriga ah mar dambe u noqon in a in astaan ​​wax ku ool ah in la sameeyo shaqooyin iyo bax aad jidka aan wax u dhimin aad xogta mahad herdamaysay
Maqaalkaan oo cinwaankeedu ahaa “2015: sanadka shidma faraha ka joojiyay iyagoo Sheekadaas a” waxaa qoray Samuel Gibbs, waayo theguardian.com on Sunday 27 December 2015 07.00 UTC
Xusuuso marka aad telefoon hore wuxuu lahaa camera a? Waxaan ahaa fiican, Hubi in, laakiin waxa ay qaaday sawiro qashinka iyo aad dhif u isticmaalo. Markaasaa waxaa u helay touchscreen a capacitive, taas oo ahayd ka khayr badan iyadoo la isticmaalayo stylus, xataa haddii aadan ku qor yaabaa iyo sidoo kale iyadoo la isticmaalayo keyboard a. Si dhakhso ah labada hagaagtay, oo waxay noqdeen daruuriya.
Markaasaa waxaa u timid shidma faraha, oo waxaad u malaysay: run ahaantii? maxaad? Habeynta in pin a ma aha in xanuun, aadan run ahaantii waxaan u baahan tahay? Oo weliba waxaad hadda xitaa ma fekero shidma faraha, ama dhammaan seconds kuwa aad badbaadiyey, maxaa yeelay, waxaad u isticmaali waqtiga oo dhan. 2015 ahaa scanners faraha sano yimid da'da.
A dhowr sano ka hor, in lagu furo telefoonka ahayd arrin multi-tuubada ah - isticmaalaya pin dheer ama password - mar kasta oo aad screen tegey madow. Waxa uu ahaa sidaas daalin in badan kaliya ma dhibaato, tegaayo dukaamada iyo wixii dul saaran, nugul dambi ah maraya. Ama kaliya in saaxiib kuwaas oo u maleeyey in aad hooyo ka phone diraya qoraalada wasakh tusay a 'dareen kaftan'.
scanners faraha ayaa u timid inaad na badbaadin ka qarow ku ibo lahayn, iyo kuwa sheekada sirgaxan la hooyooyinka our, iyadoo telefoonada naga aamin. Laakiin waxaan waa in aan la yaabay ay caddeyso si waxtar leh.
Faraha sii hab wax ku ool ah oo la aqoonsado qof, la 98.6% saxnaanta. Sawir: Roger Tooth for the Guardian
Faraha ayaa la isticmaalo ujeeddooyin aqoonsiga sida ugu 1858, sida hab lagu cadeeyo saxiixyada heshiisyada. Tan iyo markaas qaabka of tiixtiix maqaarka ayaa hab fudud oo wax ku ool ah oo la aqoonsado qof la 98.6% sax waayo farta hal, sida lagu sheegay xog ka socda Machadka Qaranka ee Maraykanka ee Heerarka iyo Technology.
scanners faraha Consumer ayaa ku dhawaad ​​muddo ugu dambeeyey 10 sano, sida caadiga ah u qalabaysan in kombiyuutarada sida qalab ammaanka ah. Laakiin scanners in qasbi user ay u mari ay farta guud shidma a cadeeyay inuu yahay mid gaabis ah oo aan sax ku filan in la aqoonsado user a 100% waqtiga on go ugu horeysay.
Waxay ahaayeen qaroomooyinkani. Wax inay iska iibiso smartphone ama computer oo aan ku dar qiimaha dhabta ah in nolosha dadka isticmaala inta badan. Waxay kaliya jahawareer ku daray halkii u yaraynta.
Apple ee Touch ID, shidma taabashada ku salaysan faraha a gundhig ah oo ka hooseeya 2013 iPhone 5S'S button guriga, markii ugu horaysay ee in la keeno la technology wanaagsan oo ku filan in loogu kalsoonaan karo loo ogaado qofka leh. Waxaa la jiray ka dhaqso badan galaya pin a oo aad ma u baahan tahay inaad mari, kaliya meel farta ku button guriga ee labaad ah ama si.
5S iPhone The keenay dareemayaal faraha uga qaaday inay u xoq on casriga ah, iyaga jeestay ka Sheekadaas ah oo wuxuu galay wax faa'iido leh. Sawir: Justin Sullivan / Getty Images
Tan iyo markii ay 2013 dareemayaal faraha ayaa soo hagaagtay oo kala duwan. Sanadkii la soo dhaafay arkay xafiiltamaan halis ah ka Samsung iyo Huawei. Sanadkan, ku dhowaad telefoonka flagship kasta oo bilaabay la shidma faraha wanaagsan, halka xittaa qaar ka mid ah bartamaha kala duwan- iyo qalabka qiimaha hoose-yimid qalabaysan iyaga la.
Maanta waxay u muuqataa on andback hore ee qalabka iyo xataa hoos batoonka dhinaca ah in kiiska Sony ee. guud Waxay aqoonsadaan faraha la agagaarka a 98% sax iyo in ka yar hal ilbiriqsi, taas oo ka dhigaysa iyaga awood-on iyo furid la mid taabashada. No qaroomooyinkani, kaliya xoogaa yar oo ammaanka muuqan daray waayo-aragnimo smartphone casriga ah.
Apple dhigay posts goolka, laakiin inta badan isticmaala Android waxay leeyihiin laba shirkadood oo la garanayo in yar oo aan u mahad celiyo waayo, taasu fudud isticmaalka casriyayn: shirkadaha Swedish faraha Cards AB iyo astaan ​​Cayiman, mid ka mid ah taas oo ka dhigaysa ka hardware iyo kuwa kale oo software ah.
In the case of Android iyo macruufka, faraha ku kaydsan yihiin gudaha iyo ma iska in server a diray – ah tallaabo muhiim ah sidii ammaanka, ka duwan password ama username, ma waxaad bedeli kartaa adiga oo faraha haddii laga xado, waa.
Apple ma aha mid keliya la shidma faraha ku hor a. HTC One ayaa A9 leedahay mid u qaabeysan sida lozenge a. Sawir: Samuel Gibbs ee Guardian ee
Marka aad isticmaashay a shidma faraha wanaagsan, waa la yaab leh u adag inay dib ugu laabato in ka jaftaa in pin ama mari qaab in lagu furo telefoonka. Taasina waa uun bilowga. casriga ah la dareemayaal faraha intooda badan ayaa sidoo kale u ogolaadaan isticmaalayaasha inay aamin qaybaha kale ee telefoonka la lambar ay, wax ku ool ah yaraynayo dhibaatada isku dayaya inuu wax Xusuusto ama galaan dheer ah, password amaan samaynta app iibsadaan, tusaale ahaan.
Haddii aad bilaabeyna smartphone ah 2016 aan shidma faraha a, waxaad laga yaabaa in sidoo kale la soo baxay ka tago camera sawir iyo screen xiriiri aad u.
Tallaabada xigta ee degdeg ah scanners faraha badan tahay inuu noqon on-screen iskaanka. No button, shidma lahayn, kaliya touchscreen ah in aqoonsan, kuwaas oo uu u taabashada. movies Science khayaaliga ah ayaa isku dayaya si ay u muujiyaan sida ay u shaqayso muddo sanado ah, haddii ay abid Doono weli la arag.
Oo faraha waa uun bilowga hirka yaboohay jismiyeed galay technology. scanners Iris, scanners gacanta-arooriye, la socodka dhaqdhaqaaqa wadnaha iyo dhinacyo kala duwan oo kale oo xad gaarka ah ee jidhka bini'aadamka waa dhan tartamaya in ay wax ku xigta ee weyn.
dib u eegis Google Nexus 6p: phablet ugu wanaagsan ee la heli karo
dib u eegis iPhone 6S: phone aad u wanaagsan Halaagsamay nolosha batari qashinka
dib u eegis HTC One A9: ma tartame iPhone aad raadineyso
← Waa maxay warqadda musqusha aad kugu leeyahay ee ku saabsan Unlock Your Self Horumarinta Power →